Izixhobo ezine zikaGoogle obungazazi | Iindaba zeGajethi
Izixhobo ezine zikaGoogle obungazazi
UGoogle ungaphezulu kakhulu kwenjini yokukhangela, kwaye kuya kufuneka uyazi. Nangona kunjalo, asinakho ukuzazi zonke izixhobo ze-intanethi ezenza ukuba zifumaneke kuthi. Sukuba nexhala, yile nto oogxa bethu be-Actualidad Gadget eyenzelwe yona, yanelisa umdla wakho wokufundisa kwaye ikufundise indlela yokufumana okungcono kwizixhobo zakho Ubusazi ukuba uGoogle unesibali sokubala, umguquleli, izichazi magama kunye nokunye okuninzi? Lixesha lokuba ufunde ukuzisebenzisaUkusuka kwisikhangeli esinye sinokwenza ezona zenzo zakudala ngokunqakraza ku "Khangela kuGoogle". Ungaphoswa zizixhobo ezilishumi zikaGoogle obungazazi (okanye ukuba).
Kwaye into yokuba i-injini yokukhangela kaGoogle iye yakrelekrele ngokuhamba kwexesha. Iqela lalo lophuhliso lizamile ukuphendula imibuzo elula kubomi bethu bemihla ngemihla, kwaye yonke le yimisebenzi kaGoogle eya kukushiya uvule umlomo.
1 UGoogle unesikhangeli samanani oluntu
2 Injini yokukhangela ehamba ngokukhawuleza
3 Ukujonga isibhakabhaka ngeGoogle Sky
4 Ukuthelekisa okunesondlo
UGoogle unesikhangeli samanani oluntu
Iinkcukacha-manani ezingapheliyo zokwanelisa umxholo womsebenzi wakho, okanye ukwanelisa umdla wakho wokufuna ukwazi ngesihloko. Khangela kuGoogle "iGoogle kaGoogle" (Google Public Data Explorer) kwaye jonga ezi manani zisuka kweyona mithombo iqhelekileyo yaseburhulumenteni.
Injini yokukhangela ehamba ngokukhawuleza
Sisoloko siphatha gadalala iSkyscanner kunye ne-eDreams, kodwa asazi ukuba uGoogle unenjini yokukhangela yenqwelomoya eya kwenza ubomi bethu bube lula xa silungiselela uhambo lwethu. Kufuneka sibhale «Iindiza» kuGoogle kwaye isixhobo esinomdla kakhulu sokuthelekisa amaxabiso siya kuvula, kukhangelo lokuqala, apho sinokuthi sifake ezona datha zichanekileyo ukuthelekisa ngokujonga kube kanye.
Ukujonga isibhakabhaka ngeGoogle Sky
Ukuba iimephu zikaGoogle kunye noMhlaba kaGoogle benze ubomi bethu babalula kuyinyani. Kodwa mhlawumbi into obungayaziyo kukuba sinokuphinda sihlalutye isibhakabhaka ngeGoogle, ngale nto sizakukhangela «Uphando isibhakabhaka»Kwinjini yokukhangela kwaye iya kuvula imephu yesibhakabhaka emangalisayo.
Ewe, iimbaleki kunye nee-dieters ziya kuba lula ngesixhobo senjini yokukhangela esingaziwayo. Uyakwazi ukutya usempilweni ukuba senza uphando olunjenge: «Zingaphi iikhalori ibhiya inayo?«. Ngale ndlela, owona mxholo wekhalori wale mveliso esifuna ukuwuthatha uya kuvulwa ngokukhawuleza kwisiphumo sokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izixhobo ezine zikaGoogle obungazazi
I-Nike self-lacing sneakers iya kufika kwimarike nge-1 kaDisemba
I-Huawei Mate 9 Pro enescreen egobile ngoku isemthethweni